I-Forex MetaTrader 4 Broker, i-MetaTrader 4 Trading, i-MT4 I-Terminal Client
I-FXCC iMetaTrader 4
Ikhaya / amaqonga / PC / MT4 kwiPC
KHUPHELE ISIKHOKELO SOMSEBENZI
I-MetaTrader i-4 yenye yezona ziqingqiweyo ezidumileyo zokuthengisa ezisehlabathini namhlanje. Zonke izixhobo zokurhweba ezifunekayo kunye nezixhobo zikhoyo ukuvumela abahwebi ukuba benze uphando kunye nohlalutyo, bangene kwaye baphume kwezohwebo baze basebenzise i-software yesithathu yokuthengisa ngokuzenzekelayo (i-Advisory Advisors okanye i-EA). Awuyonwabanga nge-EA? I-MetaTrader isebenzisa ulwimi lwayo lwenkqubo yolimi MQL4, elikuvumela ukuba wenze iinkqubo zakho zokurhweba.
Isoftware yeMetaTrader 4 Broker ibonelela ngesixhobo esimangalisayo sohlalutyo. Amaxesha amiselweyo asithoba afumaneka kwisixhobo ngasinye sezezimali. Ezi zibonelela ngohlalutyo oluneenkcukacha zamandla okucaphula. Ithala leencwadi elakhelwe ngaphakathi lezikhombisi ezingaphezulu kwama-50 kunye nezixhobo ezilungelelanisa inkqubo yohlalutyo, evumela abarhwebi ukuba babone imikhwa, bachaze iimilo ezahlukeneyo zorhwebo, babeke iindawo zokungena kunye nezokuphuma, ukuprinta iitshathi zaso nasiphi na isixhobo kwaye benze olwabo "iphepha".
I-MetaTrader i-4 iquka yonke imisebenzi yokurhweba iimfuno ze-forex zangomthengisi zanamhlanje. Iimali zeemakethe, zilindile kwaye ziyeke iilaydi, ukuyeka ukuhamba-konke kulungile apho kwizandla zakho nge-MT4.
Iqonga livumela imiyalelo ukuba ibekwe kwiindlela ezahlukeneyo, kuquka ukuthengiswa ngokuthe ngqo kumatshati. Amashadi ekhakheni afakwe yindlela ebalulekileyo kakhulu yokufumana ukungena nokuchaneka kwamaphuzu.
I-MetaTrader i-4 iquka izilwanyana zorhwebo, isixhobo esiluncedo ukukunceda ukulandelela imeko efanelekileyo kakhulu yokurhweba kunye neemeko zemarike. Nge-arsenal ye-FXCC ye-MT4 yokuthengisa, wonke amandla akho angakhanjiswa ekusebenziseni izicwangciso zakho zokurhweba, ukhuselekile ngolwazi lokuba i-suite yezixhobo kwi-MT4 zikho ukubuyela emva kwakho.
Njengokuba kukho nayiphi na imali, ukukhutshwa kolwazi oludluliselwayo kubaluleke kakhulu. I-FXCC iMetaTrader 4 Broker software isithumela ulwazi kwiivenkile kwi-128-brick encrypted. Oku kukho ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo bonke abathengi bakho. Ukongeza kule nto, i-FXCC inika ithuba lokusebenzisa i-algorithms eyongezelelweyo yoKreftagraphic Key Key. Ulwazi olukhuselekile ngale ndlela lusetshenziselwa ukuba lidibanise naliphi na ixesha elifutshane elifutshane.
I-MetaTrader 4 ibandakanya uluhlu olubanzi lwemisebenzi ekulula ukuyiqonda, ke kuthatha kuphela imizuzu embalwa ukuze ukhululeke ngazo zonke iindlela ezahlukeneyo onokuzifumana njengomrhwebi. Iqonga linomsebenzi owakhelwe-ngaphakathi "woNcedo" ukuze ufumane iimpendulo zeyona mibuzo iqhelekileyo ngokuthe ngqo ngaphakathi kwesoftware uqobo, ukuze ukwazi ukugxila kwizinto ezibalulekileyo-kurhwebo.
Kwimeko nayiphi na into, ukuba umsebenzi we-MT4 uncedo awukwazi ukuphendula umbuzo wakho, abaqhubi beFXCC abancedisayo abanako.
IMetaQuotes uLwimi4 (MQL4)
I-MetaTrader I-4 ishishini lokurhweba liza nolwimi lwakhe olwakhiwe kwiinkqubo zokurhweba iinkqubo. I-MQL4 ikuvumela ukuba udale i-EA yakho (uMcebisi weNgcali) kwaye wenze i-automate yakho ishishini ngokusekelwe kwisicwangciso sakho esilungiselelwe. Ukusebenzisa iMQL4 unokwakha iilayibrari yakho yezikhokelo zenkcubeko, izikripthi kunye nedatha yolwazi. Ngenxa yokuthandwa kwe-Forex MetaTrader ye-4 Broker platform, inani elininzi leeforamu kunye noluntu oluku-intanethi lukhulile, apho abasebenzisi banokusebenzisana kunye nokutshintshisana izicwangciso kunye neendlela zokufumana ubuninzi beelwimi zoLwimi lweMQL4 kunye ne-MetaTrader 4 ngokubanzi.
Umcebisi weengcali yindlela yokurhweba i-mechanical trade (MTS) edibeneyo kwiindawo ezithile. Abacebisi abakwazi ukukwazisa kuphela malunga nokungena kumashishini, kodwa benze iikhathazo kwi-akhawunti yezorhwebo ngokuzenzekelayo kwaye ubaqondise ngqo kumncedisi wezorhwebo. Njengazo ezininzi iinkqubo zokurhweba, i-MetaTrader 4 Trading terminal ixhasa amaqhinga okuvavanya kwiinkcukacha zembali kunye nemiboniso ebonakalayo yokungena kwamashishini kunye namaphuzu okuphuma.
Izikhokelo Zokwezifiso i-MetaTrader 4 ithatha izikhombisi zobugcisa. Izikhombisi zeMeko zivumela ukudala izikhombisi ngaphezu kwezinto ezidibeneyo kwi-terminal ye-MetaTrader 4. Njengezikhombisi ezakhelwe ngaphambili ezilayishwe kwi-MT4, izikhombisi zenkcubeko zijoliswe kuhlalutyo lobugcisa kwaye azikwazi ukuvula okanye ukuvala amashishini ngokuzenzekelayo.
Scripts ziinkqubo ezijoliswe ekusebenziseni enye yezenzo ezithile. Ngokungafani nabacebisi beeNkcazo, iiSkripthi aziqhubeki zihlakaniphile kwaye abanakho ukufikelela kwimisebenzi yokubonisa.
Iilayibrari Imithombo yolwazi yomsebenzisi apho izithintelo ezisetyenziswa rhoqo zekhowudi zeMQL4 zigcinwa. Xa kusetyenziswe isicwangciso esithile okanye i-EA kwi-MQL4, abasebenzisi banokubamba kwiilayibrari zabo zeefowuni baze bafake le mi sebenzi egcinwe kwiirobhothi zabo ezintsha zokurhweba.